OSX.PROTON iTrojan ifunyenwe kuKhuphelo lwamva nje lweBrakeBrake | Ndisuka mac
Iindaba zaqhekeka kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo. Ukhuphelo lwesiguquli sevidiyo esaziwa ngokuba yiBrandBrake esenziwe kusuku lwesi-2 ukuya kwele-6 lunokosulelwa yi-OSX.PROTON iTrojan. Iindaba zibonakala zingqinisisiwe, kuba umphuhlisi omnye uzidlulisela kubasebenzisi bazo ngokusebenzisa kwiforum kwiphepha lenkqubo. Kumaxesha akutshanje sijonga indlela iiMacOs zethu ezingasasebenziyo ngayo nge-100%. Nangona kunjalo, kukhuseleke kakhulu kunezinye iinkqubo zokusebenza, njengoko sisazi ngohlobo oluthile lweTrojan rhoqo kwiinyanga ezi-3 ukuya kwezi-4. Nangona kunjalo, kule veki, siyayazi imbonakalo entsha I-OSX.BELLA iTrojan Siyathemba ukuba akusayi kubakho zimanga zintsha kwiintsuku ezizayo.
Njengoko besitshilo, iindaba ziyavela kwiForum yenkqubo yenkqubo, kwaye umsebenzisi oyipapashayo yi-HandBrake. Kunzima ukuba umsebenzisi angalinganiswa, kwaye ngakumbi ukuba ikwayimodareyitha efanayo, ke ngoko siza kuyinika ukuthembeka. Isithuba sivela nge-8.10 kusasa ngomhla we-6, apho kwabhengezwa ukuba Ukhuphelo olwenziwe phakathi kuka-Meyi 2, 2017 nge-14: 30 i-UTC kunye noMeyi 6, 2017 nge-11: 00 ze-UTC, unethuba lama-50% lokosulelwa yi-OSX.PROTON iTrojan.
Kwiposi bayasicela ukuba siqinisekise ingxelo yethu ekhutshelweyo kwaye basixelele ukuba masenze njani. Eyokuqala, vula esweni umsebenzi weMac. Ukuba awuyazi ukuba ungayenza njani, yiya kwindawo ebonakalayo (Cmd + yokubaleka) kwaye ubhale umsebenzi wokubeka esweni. Yiya kwithebhu ye-CPU emva koko uye kwiMemori. Ukuba inkqubo ibonakala kuzo zombini iithebhu Umsebenzi_umsebenzi, I-Mac yakho mhlawumbi inesifo.
Kwimeko enjalo, yicime. Ukwenza oku kuvulekile kwisigxina, ngokwendlela yakho yesiqhelo, okanye ngendlela evakalayo yokuvula umsebenzi wokubeka esweni. Ngoku ngenisa le miyalelo ilandelayo:
uvule ukukhutshwa ~ / Ithala leencwadi / iiLaunchAgents / fr.handbrake.activity_agent.plist
rm -rf ~ / Ithala leencwadi / iRenderFiles / umsebenzi_agent.app
ukuba ~ / iThala leencwadi / iVidiyoFrameworks / iqulethe iproton.zip, susa ifolda
Okokugqibela, khangela kunye khupha zonke iinguqulelo ze "HandBrake.app".
Ngoku uyisusile iTrojan, kodwa awazi monakalo onokuthi ubange kuwe. Ke ngoko, tshintsha onke amagama okugqitha onawo kwi-macOS keychain.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » OSX.PROTON iTrojan ifunyenwe kuKhuphelo lwamva nje lweBrake